Rita, Writing for My Sake!: 'ကြည်အေး' အကြောင်းနဲ့ ဟိုဟိုဒီဒီ
Posted by Rita at 8/09/2010 12:17:00 AM
အပြင်ကလူ ၁ ၂ ကို ပိုကြိုက်တယ်
ခု စိတ်ကူးချိုချိုက ပြန်ထုတ်နေတယ် ကြည်အေး စာအုပ်တွေ
နှစ်ယောက်သားစကားပြောကြတာစိတ်ဝင်စားဖို့ လည်းကောင်းတယ်။ဖတ်လို့လည်းကောင်းတယ်။ အဲလို စာအကြောင်းပေအကြောင်းပြောနေတဲ့ သူတွေဘေးမှာငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီးနားထောင်ချင် တယ်။ပြောချင်တဲ့အခါမှဝင်ပြောတာပေါ့။ ခုတလော ကြည်အေးရဲ့ စာတွေကိုသိပ်အာရုံကျနေမိတယ်။ ကဗျာ၊၀တ္ထုအကုန်ဖတ်လို့ကိုမရိုးနိုင်သလိုပဲ။ "ဖုန်းသက်တိုင်"ကိုလည်းသိပ်ကြိုက်တယ်။အကြိုက်ဆုံးကြည်အေးဝတ္ထုပဲ။
btw, this is mashwemi :-)
တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် အမ ..
သည်မနက်ပဲကြည်အေး ဘလော့လေးကို သေချာပြန်လုပ်မိတယ် ...
မသိသူတွေသိသွားအောင် ဖြန့် ပေးပါလားဟင် ... ကျတော်မိတ်ဆွေအချို့တောင် "ဖုန်းသက်တိုင်" တင်နေတာ မသိဘူးဆိုလို့ ...
ကြည်အေး ပရိတ်သတ်တွေ အတွက်ပါ ..
I like all novels of kYI aYE.
@ Aung Phyoe
အောင်ဖြိုးပြောတဲ့ထဲမှာ "လက်စားချေခြင်း" ကို ပြန်မှတ်မိလာတယ်။ ရှေးဆန်တဲ့ မိဘတွေရဲ့ အုပ်ထိန်းမှုအောက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်အကြောင်းလေ။ ဘုရားပွဲဈေးသွားကြတဲ့ ဇာတ်ကွက်လေး ပြန်သတိရလာတယ်။
ငယ်ငယ်က ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး စာရေးဆရာက ကြည်အေး နဲ့ ရန်ကုန်ဘဆွေပါ ..
ကြည်အေးကို ဘယ်လောက် ရူးဖူးလဲ ဆိုတော့ သူ့ကဗျာတွေကို မဂ္ဂဇင်း အဟောင်းတွေကရှာပြီး လက်ရေးနဲ့ ကူးဖူးပါတယ်၊ အားမာန်သစ်က ကဗျာပေါင်းချုပ်ထွက်တော့ အကျအပေါက်များလိုက်တာ၊ ကျွန်တော့်မှာ အားလုံးနီးပါး ရှိပြီးသား ဆိုတော့ ဝယ်တောင် မဝယ်ဖြစ်ပါဘူး။ ဒုတိယ နှိပ်ခြင်းကတော့ မဆိုးပါဘူး။
ကြည်အေး လုံးချင်းတော်တော်များများက ရှုမဝ မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုရှည်နဲ့ အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည်တွေပါ။ ပြီးမှ လုံးချင်းပြန်ထွက်တာပါ။
(၁) နွမ်းလျအိမ်ပြန် (သူ့ကို ကြည်အေးဖြစ်စေတဲ့ ဝတ္ထုလို့ ပြောရမလားပဲ၊ တာရာမှာ ပါခဲ့တာထင်တယ်။)
(၂) မီ (မေ၊ မီ၊ မြိုင်၊ မွှေး ဆိုပြီး မြန်မာစာပေမှာ နာမည်ကြီးခဲ့တာပေါ့။)
(၃) တမ်းတတတ်သည် (ရှုမဝ ဝတ္ထုရှည်) တကယ့် အဖြစ်အပျက်ကို အခြေခံပါတယ်၊ အဲဒီဇတ်လမ်းကို အခြားသူရေးတာကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖူးပါတယ်၊ မမထား နဲ့ အပါ လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ]မြားနတ်မောင်} ပါ..
(၄) ဖုန်းသက်တိုင် (ရှုမဝ ဝတ္ထုရှည်)
(၅) ကျမ ပညာသည် (ရှုမဝ ဝတ္ထုရှည်) ဇတ်သဘင် နောက်ခံပါ၊ ရီရယ်လစ်ဇင် ဆန်ပါတယ်၊ နုနုရည် ရေးခဲ့တာထက်တောင် သဘာဝ ပိုကျပါတယ်။
(၆) မေတ္တာမီးအိမ် (ရှုမဝ သုံးလဆက် ဝတ္ထုရှည်) စိတ္တဇဝေဒနာရှင် ဇတ်လမ်းပါ။ ကျွန်တော့်မှာ ရှုမဝမူ ရှိပါတယ်။ ပန်းချီအောင်စိုး လက်ရာ ၃ ပုံလိုချင်ရင် တင်ပေးလို့ ရပါတယ်။
(၇) မောင်၊ ကိုကို နဲ့ မြနန္ဒာ (ရှုမဝ တ္ထုရှည် သုံးပုဒ်ပါ) ]မောင်နဲ့မြနန္ဒာ} ]ကိုကိုနဲ့မြနန္ဒာ} ]မြနန္ဒာ ပြောချင်ပါသေးသည်} ဆိုပြီး ဇာတ်ကြောင်း တခုထဲ ကို သုံးယောက် ရဲ့ အမြင်နဲ့ရေးထားတာပါ။
(၈) ကေဖွဲ့ဆိုသီ (လုံးချင်းတန်းထွက်တယ် ထင်ပါတယ်)
(၉ ) အပြင်ကလူ (ရှုမဝ ဝတ္ထုရှည်) နောက်ပိုင်းကျပါတယ်၊ အိမ်ထောင်ရေးအမြင်နဲ့ အခြား အမြင်သစ်တွေကို ရေးသွားတာပါ။ အိတ်ဇစ်ဆန်တယ်လို ပြောကြပေမယ့်၊ ကျွန်တော်ကတော့ သဘောမတူပါ။ ဒါလည်း ကျွန်တော့်မှာ ရှုမဝမူ ရှိပါတယ်။
(၁၀) တောတောင်ရေမြေ (ဂျွန်စတိန်းဘက် ကို ဘာသာပြန်တာပါ၊ လူသိနည်းပါတယ်)
နောက်ပိုင်းတွေတော့ နဲနဲ အဆက်ပြတ်သွားပါတယ် ..
(၁၁) အပြင်ကလူ-၂ (အပြင်ကလူလောက် မကြိုက်ပါ။)
(၁၂) ဖူးငုံပွင့်သစ် (ကေဖွဲ့ဆိုသီ အဆက်၊ လုံးဝလောက် မကြိုက်ပါ။)
(၁၃) မှန်၏မှောင်ရိပ် (စိုးနဲ့ခိုင်)
(၁၄) အိမ်ဖြူလင်းသစ် (အဲဒီ ၂ အုပ်က သူ့လူနာတယောက် အကြောင်းကို အခြေခံထားတယ် ကြားဖူးပါတယ်။)
ကြည်အေး ကို ဝတ္ထုတို လည်းကြိုက်ပါတယ် "တယောက်ဆွဲ တယောက်လစ် ဂိုဂင်ဖြစ်၏" "မိုးတွင်းထမင်းကြမ်း" "နှုတ်ခမ်းထူမလေး" "ဗျောက်ဖောက်၍ ဝါကျွတ်ခြင်း" စသည်ဖြင့် ပြောရရင် အများကြီးပါ။ "ညတည" က နည်းနည်းရှည်ပေမယ့် တကယ်က အတိုထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ ပျောက်နေတာက ကဗျာတွေ စုကူးထားတာရယ်။ ဖုန်းသက်တိုင်အပါအဝင် ရှုမဝနဲ့ သွေးသောက်ထဲက အတိုတွေ စုချုပ်ထားတဲ့ လက်သုံးလုံးလောက် စာအုပ်ကြီးရယ် :(
ကိုယ်က ကြည်အေးစာ အားလုံး မဖတ်ဖူးဘူး။ ၀တ္တုရှည်တစ်ချို့ပဲ ဖတ်ဖူးတာ။ အချိန်ရယင် ကြည်အေး စာစုတွေချည်း ဖတ်ကြည့်ချင်တယ်။
ကြည်အေးကြိုက်တဲ့ဘဝမှာ တစ်ချို့ စာသားတွေအလွတ်တောင်ရတယ်။
မမများသာ လည်း ဖတ်ကြည့်ပါလားကောင်းတယ် ။
မိုး နှင့်သရက် လည်းကြိုက်တယ် ။
"ရေဆန်လမ်း" "နွေတစ်ည" "မသိန်းရှင့်ဆီ ပို့ပေးပါ" had been read long time ago when I young (not remember year about 1974).
I liked so much. I felt worry to go YGN after read. Is is difficult to stay it RGN evenasingle man.
I had read ရေဆန်လမ်း again when I reached Rangoon about 1977.
I had seen that Rangoon is very very good place for me.
A lot of job and opportunity in RGN.
Available education in various way (if you want)
In ရေဆန်လမ်း , the man always was starving in his friend's small room. That is out of way.